शेलको बिरूद्ध मौसम सम्बन्धी नियम Law & More B.V.
ब्लग » शेलको बिरूद्ध मौसम सम्बन्धी नियम
शेलको बिरूद्ध मौसम सम्बन्धी नियम
26 सक्छ, 2021
रॉयल डच शेल पीएलसी (पछि: 'आरडीएस') को बिरूद्ध मिलिउडेफेन्सीको मामलामा हेगको जिल्ला अदालतले गरेको फैसला हावाको मुद्दामा माईलस्टोन हो। नेदरल्याण्ड्सका लागि सुप्रीम कोर्टले यूरेन्डाको फैसलाको महत्वपूर्ण पुष्टि पछि यो अर्को चरण हो जहाँ राज्यलाई पेरिस सम्झौताको लक्ष्य अनुरूप यसको उत्सर्जन घटाउने आदेश दिइएको थियो। पहिलो पटक, आरडीएस जस्तो कम्पनीले पनि अब खतरनाक मौसम परिवर्तनको प्रतिकारमा कारबाही गर्न बाध्य छ। यो लेखले यस शासनको मुख्य तत्व र प्रभावहरूको रूपरेखा दिनेछ।
सर्वप्रथम, दावीको स्वीकार्यता महत्त्वपूर्ण छ। अदालतले सिभिल क्लेमको पदार्थमा प्रवेश गर्न सक्नु अघि, दावी स्वीकारनीय हुनुपर्दछ। अदालतले निर्णय दियो कि केवल सामूहिक कार्यहरू जसले हालको र भावी पुस्ताको डच नागरिकहरूको चासोको सेवा गर्दछन्। यी कार्यहरू, ती कार्यहरूको विपरीत जुन विश्व जनसंख्याको चासोको लागि काम गर्दछ, सँग पर्याप्त रुचि थियो। यो किनभने डच नागरिकहरूले मौसम परिवर्तनबाट भोग्न सक्ने नतिजा समग्र विश्व जनसंख्याको भन्दा केही हदसम्म फरक हुन्छ। एक्शनएडले यसको व्यापक रूपले बनाइएको विश्वव्यापी उद्देश्यसँग डच जनसंख्याको विशिष्ट चासोहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसकारण, यसको दावी अस्वीकार्य घोषणा गरियो। व्यक्तिगत वादीहरूलाई पनि उनीहरूको दावीमा अस्वीकार्य घोषित गरियो, किनकि उनीहरूले सामूहिक दावी बाहेक स्वीकार्य हुन पर्याप्त व्यक्तिगत चासो देखाएनन्।
मामला को परिस्थितिहरु
अब दायर गरिएका केही दावीहरू स्वीकार्य घोषित भइसकेका छन्, अदालतले उनीहरूको मूल्या assess्कन गर्न सक्षम थियो। मिलिउडेफेन्सीको दावीलाई अनुमति दिन कि आरडीएसले 45 6% शुद्ध उत्सर्जन घटाउन बाध्य छ, अदालतले सर्वप्रथम निर्धारण गर्नु पर्छ कि यस्तो बाध्यता आरडीएसमा निर्भर छ। यो कलाको हेरचाहको अलिखित मानकको आधारमा मूल्या be्कन गर्नुपर्‍यो। :: १162२ डीसीसी, जसमा केसको सबै अवस्थाले भूमिका खेल्छ। अदालतले लिईएको परिस्थितिमा निम्न समावेश थिए। आरडीएसले सम्पूर्ण शेल समूहका लागि समूह नीति स्थापना गर्दछ जुन पछि समूहमा अन्य कम्पनीहरूद्वारा गरिन्छ। शेल समूह, यसको आपूर्तिकर्ता र ग्राहकहरु संग, पर्याप्त CO2 उत्सर्जन को लागी जिम्मेवार छ, जो नेदरल्याण्ड्स सहित धेरै राज्यहरु को उत्सर्जन भन्दा बढी छ। यी उत्सर्जनले मौसम परिवर्तन ल्याउँदछ, जसको नतिजा डच बासिन्दाहरूले महसुस गर्छन् (उदाहरणका लागि स्वास्थ्यमा, तर यसले शारीरिक जोखिमको रूपमा पनि, अन्य चीजहरूको बीचमा, समुद्रको सतह बढ्दो)।
डच नागरिकहरूले अनुभव गरेका जलवायु परिवर्तनको नतिजाले उनीहरूको मानवअधिकार, विशेष गरी जीवनको अधिकार र अव्यवस्थित पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई असर गर्दछ। यद्यपि मानव अधिकारहरू सिद्धान्तमा नागरिकहरू र सरकार बीचमा लागू हुन्छन् र त्यसैले कम्पनीहरूका लागि कुनै सीधा दायित्व छैन, कम्पनीहरूले यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नै पर्दछ। यदि राज्य उल्ल if्घनको बिरूद्ध संरक्षण गर्न असफल भएमा यो पनि लागू हुन्छ। कम्पनीहरूले सम्मान गर्न सक्ने मानवाधिकारहरू पनि यसमा सम्मिलित छन् नरम कानून उपकरण जस्तै व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी युएन गाईडिंग सिद्धान्तहरु, आरडीएस द्वारा समर्थित, र बहुपक्षीय उद्यमहरूका लागि OECD दिशानिर्देशहरू। अदालतको अनुसार आरडीएसका लागि दायित्व मान्न सकिने आधारमा यी उपकरणहरूबाट प्रचलित अन्तर्दृष्टिले अलिखित लिखित हेरचाहको मानकको व्याख्या गर्न योगदान गर्दछ।
मानव अधिकारको सम्मान गर्न कम्पनीहरूको दायित्व मानव गतिविधिमा उनीहरूको गतिविधिको प्रभावको गम्भीरतामा निर्भर गर्दछ। अदालतले माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा आरडीएसको मामलामा यसलाई ग्रहण गर्‍यो। यसबाहेक, यस्तो दायित्व मान्नु अघि, यो यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि कम्पनीसँग उल्ल .्घन रोक्नको लागि पर्याप्त संभावनाहरू र प्रभावहरू छन्। अदालतले सोचे कि यो केस हो किनभने कम्पनीहरूले सम्पूर्ण भित्र प्रभाव पार्छन् मूल्य श्रृंखला: दुवै कम्पनी भित्र / समूह भित्र नै नीति निर्माण को माध्यम बाट र ग्राहकहरु र आपूर्तिकर्ताहरु लाई उत्पादन र सेवाहरु को प्रावधान को माध्यम बाट। किनभने कम्पनीमा नै प्रभाव सबैभन्दा ठूलो हो, RDS परिणामहरू प्राप्त गर्न एक दायित्वको अधीनमा छ। आरडीएसले आपूर्तिकर्ता र ग्राहकहरूको तर्फबाट प्रयास गर्नुपर्दछ।
अदालतले यस दायित्वको सीमा निम्नानुसार मूल्यांकन गर्‍यो। पेरिस सम्झौता र आईपीसीसीका रिपोर्टका अनुसार ग्लोबल वार्मिंगका लागि स्वीकृत आदर्श अधिकतम १. 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित छ। दाबी गरिएको कटौती 45 of%, २०१ with को साथ ०, आईपीसीसीले प्रस्ताव गरे जस्तै कमी अदालतको अनुसार पर्याप्त छ। त्यसकारण यसलाई घटाउने दायित्वका रूपमा अपनाउन सकिन्छ। यस्तो दायित्व केवल अदालतले मात्र लागू गर्न सक्दछ यदि आरडीएस विफल हुन्छ वा यस दायित्वमा असफल हुने धम्की दिन्छ। अदालतले यो संकेत गर्यो कि यो पछिल्लो केस हो किनभने समूह नीतिको अपर्याप्त रूपमा यस्तो उल्लंघनको खतरालाई बेवास्ता गर्न ठोस छ।
निर्णय र बचाव
यसैले अदालतले आरडीएस र शेल समूह भित्रका अन्य कम्पनीहरुलाई शेल समूहको व्यापार गतिविधिहरु संग सम्बन्धित वायुमण्डल (Scope १, २ र)) मा सबै CO2 उत्सर्जनको संयुक्त वार्षिक मात्रा सीमित गर्न वा कारण गर्न आदेश दियो र ऊर्जा- उत्पादनहरू यस्तो तरिकाले असर गर्छ कि वर्ष २०1० को अन्तसम्ममा यो खण्ड कम्तिमा १23 of को स्तरको तुलनामा कूल 2030 45% ले कम हुने छ। आरडीएसको प्रतिरक्षा अपर्याप्त छ कि यो आदेश रोक्नको लागि। उदाहरणका लागि अदालतले सही प्रतिस्थापनको तर्कलाई विचार गर्यो, जसले यो संकेत गर्दछ कि शेल समूहको गतिविधि कसैले लिने छ यदि कमी दायित्व लगाइएको छ भने अपर्याप्त प्रमाणित छ। थप रूपमा, तथ्य यो छ कि आरडीएस पूर्ण रूपले मौसम परिवर्तनको लागि जिम्मेवार छैन, अदालतले ग्लोबल वार्मिंग सीमित गर्नका लागि गहन प्रयत्न र जिम्मेवारीको भारबाट आरडीएसलाई मुक्त गर्दैन।
यसले यो स्पष्ट पार्दछ कि यस निर्णयको नतिजा अन्य कम्पनीहरूमा के हुन्छ। यदि तिनीहरू उत्सर्जनको एक महत्त्वपूर्ण रकमको लागि जिम्मेवार छन् (उदाहरणका लागि, अन्य तेल र ग्यास कम्पनीहरू), तिनीहरूलाई अदालतमा पनि लैजाने र सजाय दिन सकिन्छ यदि कम्पनीले यी उत्सर्जनहरूलाई सीमित गर्ने नीति मार्फत अपर्याप्त प्रयास गरे भने। यस दायित्व जोखिमले भरि अझ कडा उत्सर्जन घटाउने नीतिलाई कल गर्दछ मूल्य श्रृंखलाउदाहरणका लागि कम्पनी र समूह आफैंका साथ आफ्ना ग्राहकहरू र आपूर्तिकर्ताहरूको लागि। यस नीतिको लागि, आरडीएस तर्फ कटौती दायित्व जत्तिकै कटौती लागू गर्न सकिन्छ।
मिलिउडेफेन्सीको आरडीएस बिरूद्ध मौसम सम्बन्धी मुद्दाले गरेको निर्णयले शेल ग्रुपलाई मात्र होइन अन्य जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अन्य कम्पनीहरूका लागि सुदूरपश्चात पनि छ। जे होस्, यी परिणामहरू खतरनाक मौसम परिवर्तन रोक्नको लागि तत्काल आवश्यकता द्वारा धर्मीकरण गर्न सकिन्छ। के तपाइँसँग यस सत्तारूढ र तपाइँको कम्पनी को लागी यसको सम्भावित परिणामहरु को बारे मा कुनै प्रश्न छ? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रो वकिलहरू नागरिक दायित्व कानूनमा विशेषज्ञ छन् र तपाईंलाई मद्दत गर्न खुसी हुनेछन्।
अघिल्लो पोस्ट दाता सम्झौता: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ?
अर्को पोस्ट अदालतको बारेमा गुनासो पेश गर्नुहोस्